Soundbar တွေ ဘာကြောင့် သုံးလာကြသလဲ? ~ The ICT.com.mm Blog
Audio, Gadgets, Lifestyle
Soundbar တွေ ဘာကြောင့် သုံးလာကြသလဲ?
Soundbar ဆိုတာက သမာရိုးကျစပီကာတွေနဲ့ မတူဘဲ ကျယ်ပြန့်တဲ့တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စပီကာအမျိုးအစား တစ်ခုပါ။ ပုံမှန်စပီကာတွေလို အပေါ်ကို မြင့်တက်တဲ့ ဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဘေးဘက်ကို ကျယ်ပြန့်သွားတဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ စပီကာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဘေးဘက်ကို ပြန့်ကားနေတဲ့ ဒီဇိုင်းက အသံဖန်တီးမှုအတွက်တင်သာမကဘဲ Flat TV, အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံ နဲ့ ပရိုဂျက်တာတွေရဲ့ အထက် သို့မဟုတ် အောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် soundbar တစ်ခုအတွင်းမှာ ပတ်လည်အသံ/ စတီရီယိုအသံစနစ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ စပီကာတွေအများအပြားကို ထည့်သွင်းထားကြပါတယ်။ အချို့သော soundbar တွေမှာတော့ သီးခြား Subwoofer တစ်လုံးကို ထည့်သွင်းထားလေ့ရှိပြီး soundbar ရဲ့ အသံအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Soundbar တွေကို အဓိကအားဖြင့် Bass အသံထွက်ကောင်းမွန်အောင် အထူးဒီဇိုင်းဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Flat TV Displays တွေကို အသုံးပြုနှုန်း များပြားလာတာနဲ့အမျှ soundbar တွေကိုလည်း ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အရင်တုန်းက TV တွေကို ကြီးမားတဲ့ ကိုယ်ထည်ကြီးတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ ကိုယ်ထည်အတွင်းမှာ ကြီးမားပြီး အသံအားကောင်းတဲ့ စပီကာတွေကို ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Flat TV တွေခေတ်ကို ရောက်လာချိန်မှာ ကိုယ်ထည်ကို ပါးလွှာတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်လာကြတဲ့အတွက် စပီကာတွေကို နေရာနည်းနည်းပဲ ပေးနိုင်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် Flat TV တွေမှာ မူလပါဝင်တဲ့ စပီကာတွေက Bass သံ အားမကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒီအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့ soundbar တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Soundbar တွေရဲ့ အားသာချက်က အသံဆုံးရှံးမှုမရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမာရိုးကျ TV နဲ့ မော်နီတာတွေမှာ စပီကာတွေကို နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အသံဟာ နံရံကို ရိုက်ခတ်ပြီး အသံအရည်အသွေး ကျဆင်းသွားပါတယ်။ soundbar တွေက ကြည့်ရှုနေသူတွေဆီကို တိုက်ရိုက်အသံရောက်ရှိတာကြောင့် ဒီလိုမျိုး အသံအရည်အသွေးကျဆင်းတဲ့ပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် soundbar တွေက ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ သေးငယ်တဲ့အတွက် Flat Display တွေအောက်မှာ နေရာမစားဘဲ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
Soundbar တွေဟာ မိမိဘာသာ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ရုံသာမကဘဲ အခြား စတီရီယို စပီကာစနစ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြင်ရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်ခန်းကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းစေဦးမှာပါ။ ကြိုးချိတ်ဆက်ရတဲ့ soundbar တွေရှိသလို ကြိုးမဲ့ Wireless နဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အားသာချက်တွေကြောင့်ပဲ soundbar တွေကို သမာရိုးကျစပီကာစနစ်တွေထက် လူသုံးများလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်စီတီအွန်လိုင်းစတိုးမှာ Dell, Edifier, JBL, LG, Remax, Sony, Xiaomi စတဲ့ soundbar တွေကို အမျိုးအစားအစုံအလင်၊ ဈေးနှုန်းအစားစား၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်အပြည့်နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ soundbar တွေကို အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် ဝင်ရောက်လေ့လာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Newer ICT မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ Technical Service များ
Older Microsoft Home Edition မှနေ Pro Edition သို့ upgrade လုပ်နည်း